Nyeredzi yekupfura: chii icho, chii chiri mavambo ayo uye hunhu | Network Meteorology
ChiGerman Portillo | 13/05/2021 10:00 | Kuongorora nyeredzi
Chokwadi wakamboona imwe Nyeredzi uye maita chinhu chakajairika kuita chishuwo. Pahusiku hwakazara, denga rakajeka rinogona kuoneka dzichipfura nyeredzi, kunyanya pane dzimwe nguva dzegore. Nekudaro, chii chaizvo chiri nyeredzi yekupfura? Zvinogona kukuvadza here? Inobva kupi?
Muchikamu chino tiri kukuudza zvese zvaunoda kuti uzive nezveyeredzi yekupfura, kwayakatangira, hunhu uye kuda kuziva.
1 Chii chinonzi nyeredzi yekupfura
2 Zvinogona kucherechedzwa riinhi?
3 Kwakatangira uye nhoroondo yeyeredzi yekupfura
4 Zvimwe zvinoda kuziva
Chii chinonzi nyeredzi yekupfura
Nyeredzi yekupfura (kana mameteor, ayo akafanana) idiki diki (kazhinji pakati pemamilimita uye mashoma masendimita). Kupinda mumhepo yepasi nekumhanya kwazvo, ivo "vanopisa" nekuda kwekukwesana kwemhepo (muchokwadi, kupenya kunokonzerwa neionization) uye ivo vanogadzira mwenje nzira inopfuura nekukurumidza kuburikidza nedenga, iyo yatinoti nyeredzi inopfura.
Chitarisiko chayo chakasiyana kwazvo. Vanogona kupenya zvakawanda kana zvishoma. Iyo trajectory inogona kupfupika kana kureba. Vamwe vanosiya nzira yakajeka kwenguva yakati, asi vamwe vasingasiye. Ivo vanowanzo kumhanya kwazvo (vanonyangarika tisati tane nguva yekutaura!). Asi mamwe anononoka uye anogona kutora masekondi mashoma. Dzimwe nguva vanoratidza mamwe mavara: akatsvuka, greenish, bhuruu, nezvimwe. Zvinoenderana nekemikari yekuumbwa kwemameteor. Kwakatangira zvinhu izvi kuri mumakometi, uye makometi anorasikirwa nezvinhu uye anozvisiya kumashure.
Kana chidimbu chakakura kwazvo (masendimita mashoma), nyeredzi yekupfura ichave yakajeka kwazvo, inonzi fireball. Izvo zvatinoona iwo mabhora emweya ionized wakavakomberedza. Kupenya kwemotokari kunoshamisa, zvichivaita kuti vaoneke vakanyanya kunaka kunyange masikati. Vamwe vanogona kutyora munzira yavo, kuratidza kupenya kana kuputika kudiki, kana kuita ruzha. Vanowanzo siya nzira inoenderera (iyi ndiyo nzira yemhepo ionized yavanosiya kumashure) kana utsi. Dzimwe nguva dzinogona kupenya zvakakwana kuti dzionekwe kuseri kwemakore, saka dzimwe nguva tinogona kuona makore akavhenekerwa kwechinguva.
Zvinogona kucherechedzwa riinhi?
Nyeredzi dzinopfura dzinogona kucherechedzwa pane chero husiku hwakajeka, kunyangwe pane humwe husiku hwegore, dzakanyanya kuwanda uye kupesana kwemuchadenga kunogona kupisa mameteor anorema makirogiramu akati wandei. Zvisinei, kana chidimbu ichi chakanyanya kukura, chingatadze kuora zvizere nekusvika pamusoro penyika. Saka chimuti chinonzi meteorite. Nyika yedu yanga ichitambira mameteorite ehukuru hukuru uye kunyange hukuru.
Imwe yemakomo makuru emvura ndeye nyaya yePerseids, inozivikanwa semisodzi yaSaint Lawrence. Kwatinogona kuvaona mumatenga pakati paAugust pamwe nemikana yakawanda.
Kana iwe uchida kuona nyeredzi inopfura, iwe unofanirwa kufunga nezve mamwe mazano. Hazvina njodzi kuenda kumunda kunotarisa kudenga uye kuona nyeredzi inopfura. Asi hongu, nekutevera aya mazano, tinogona kuwedzera mukana wekuona imwe. Ngatione kuti ndeapi mazano aya:
Iwe unofanirwa kusiya guta husiku uye utsvage yekutarisa nzvimbo mumunda umo denga rakanyatsojeka uye hapana kana mashoma mwenje kusvibiswa. Rimwe rematambudziko makuru mazuva ano ekukwanisa kuona denga rine nyeredzi rinogara mukusviba kwechiedza kunokonzerwa nemaguta. Isu tinofanirwa kuziva kuti kuvapo kwechiedza chekugadzira kunotadzisa husiku husiku. Naizvozvo, kana guta ratinogara rakazara uye rakajeka, isu tichafanira kuenda kure zvakakwana kuti zvisatikanganisa.
Zvakakosha kuti denga rakanyatsojekaSezvo kune makore mariri, tichakwanisa kuona nyeredzi. Izvo zvakare hazvikurudzirwe kwazvo nezvekupfura nyeredzi panguva yakazara yemwedzi husiku. Izvi zvinodaro nekuti kuratidzwa kwemwedzi uzere kunogona kukonzera kusvibiswa kwechiedza uye kunogona kutitadzisa kuona dzimwe nyeredzi padyo padyo nayo.
Izvo zvakanaka ndezve kutsvaga husiku hwakajeka nemwedzi.
Hapana kushandiswa kwema binoculars kana materesikopu. Kutarisa kwakanyanya kunonyanya kushanda kana waita neziso rakashama uye kana maziso ako achinge ajairana nerima uye nyeredzi.
Kwakatangira uye nhoroondo yeyeredzi yekupfura
Nyeredzi dzinopfura dzinoita senge nyeredzi dziri kure dziri kupfuura nedenga rehusiku. Zvisinei, nyeredzi inopfura haisi nyeredzi zvachose uye haisi kure kure. Munguva dzekare, vanhu vaifunga kuti mameteor aive chikamu chemamiriro ekunze, kunge mheni kana gobvu gobvu. Asi ikozvino tinoziva kuti nyeredzi dzinopfura zvinhu chaizvo zvinobva kunze kwekunze. Zvimedu zvedombo zvemhando dzakasiyana siyana zvinoyangarara muchadenga. Mamwe ematombo aya, anonzi meteoroid, anokwezva pasi uye nemuchadenga medu. Kukwezva kuri muchikamu kune chiito chegiravhiti yePasi, saka pamapuraneti mahombe, zvinhu izvi zvinowanzo kukwezva.
Aya matombo (kunyanya kukura kwejecha rejecha) anouya padhuze nepasi pakumhanya anosvika makiromita makumi masere pasekondi imwe, uye kukakavadzana kwemhepo kunovaipisa kusvikira vapenya senyeredzi. Paunoona nyeredzi inopfura, iwe uri kunyatso tarisa pameteor iri kupisa mumhepo. Asi iwe unofanirwa kuona nyeredzi inopfura nekukasira, nekuti kazhinji havagari anopfuura sekondi kana maviri vasati vanyangarika zvachose. Meteor dzinosvika pasi hadzina kunyatsopedzwa mudenga redu. Anenge mamirioni makumi manomwe nemashanu emameteeti anodhumhana mumhepo yedu mazuva ese.
Zvimwe zvinoda kuziva
Tinofanira kutaura kuti kupenya uye kuwanda kweyeredzi dzekupfura dzinosiyana zvakanyanya. Isu tinoona huwandu hukuru hwediki-saizi, yakaderera-kupenya nyeredzi nyeredzi, uye diki nhamba yeavo asina kupenya zvishoma uye nekudaro akakura.
Kana nyeredzi yekupfura yakakura zvakakwana, tinokwanisa kuona kuti inosiya maratidziro emweya ioniyoni anogona kugara kwemaminetsi mashoma. Muswe weyeredzi yekupfura unopenya uye ruvara rwayo runotsamira paonisi gasi. Semuenzaniso, iyo yakasvibira nzira inogona kukonzerwa neionized (mudenga) okisijeni. Zvakare, zvinhu zvinopisa mhepo zveyeredzi yekupfura zvinozoburitsa ruvara rwunoenderana neinobuda, uye zvinoenderana netembiricha yakasvika panguva yekudonha.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda nezvekupfura nyeredzi uye maitiro avo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Kuongorora nyeredzi » Nyeredzi